Ciidamada Al Shabaab oo Dagaal Kula Wareegay Deegaanka Sabuun Ee Duleedka Magaalada Jowhar.
Saturday March 04, 2017 - 19:23:19 in Wararka by Super Admin
Ugu yaraan Hal Askari oo katirsan ciidamada dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa lagu dilay tira kalane waa dhaawacmeen kadib weerar xooggan oo ka dhacay deegaan katirsan gobolka Sh/dhexe.
Wararka ka imaanaya duleedka degmada Jowhar ayaa sheegaya in ciidamo katirsan Xarakada Al Shabaab ay weerar culus ku qaadeen Buundada deegaanka Sabuun halkaasi oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad hubeysan.
Goob Joogayaal ayaa sheegay in hal askari lagu dilay weerarka halka 2 kale ay dhaawacyo kasoo gaareen, wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada Al Shabaab ay si buuxda ula wareegeen Buundada Sabuun iyo saldhiggii ay ku sugnaayeen ciidanka DF-ka.
Saraakiil u hadashay Xarakada Al Shabaab ayaa iyana xaqiijiyay in ay weerar khasaara dhaliyay ku qaadeen deegaanka Sabuun halkaasi oo ay ka Eryeen ciidamadii DF-ka sida ay baahisay idaacadda Andalus ee Afka Xarakada ku hadasha.
Khamiistii lasoo dhaafay ayay aheyd markii weerar askar lagu dilay uu ka dhacay deegaanka Warciise oo qiyaastii 12 KM dhanka Bari uga beegan degmada Mahadaay.